Al-Shabaab oo dilka saddex ka mid ah saraakiisheeda u cuskatay inay hagayeen diyaarado duqeeyay gobolada Sh/hoose iyo J/dhexe | Radiomaanta.com
You are here » Radiomaanta.com » Wararka » Al-Shabaab oo dilka saddex ka mid ah saraakiisheeda u cuskatay inay hagayeen diyaarado duqeeyay gobolada Sh/hoose iyo J/dhexe
Al-Shabaab oo dilka saddex ka mid ah saraakiisheeda u cuskatay inay hagayeen diyaarado duqeeyay gobolada Sh/hoose iyo J/dhexe
Posted By admin On 5th March, 2014. Under Wararka |
Magaalada Baraawe ee gobolka J/hoose waxaa lagu toogtay saddex ka tirsan saraakiisha ururka Al-Shabaab, kaddib markii lagu soo oogay dembi la xariira basaasnimo iyo inay hagayeen diyaarado duqeymo ka geystay degmooyin ka tirsan gobolada J/dhexe iyo Sh/hoose.
Xukunkaan oo ay fulisay Maxkamadda ay Shabaabka ku leeyihiin magaalada Baraawe ayaa qaalligii fulinayay xukunka waxa uu sheegay in ragga la soo eedeeyay ay qirteen inay iyagu ku lug lahaayeen mid ka mid ah madaxda sare ee ururka Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn ka dhacday degaano ka tirsan degmada Baraawe.
Waxaa kale oo maxkamadda Al-Shabaab ay sheegtay in qaar ka mid ah saddexda nin ay la shaqeynayeen hay’adaha amniga maamulka Puntland iyo Dowladda Federaalka, iyadoo mid ka mid ah saddexdaasi ninna ay walaalo yihiin C/raxmaan Madaxweynihii hore ee Puntland.
Dembiga kale ee Maxkamadda Al-Shabaab ku oogtay saddexda waxaa ka mid ah inay ka heleen liis ay ku qornaayeen rag ka tirsan Shabaab oo la baadi goobayo isla markaana ay raadinayeen inay helaan goobta ay ku sugan yihiin.
Saddexda nin ee Al-Shabaab ku toogteen degmada Baraawe oo iyagu horay uga tirsanaa isla ururka Al-Shabaab ayaa magacyadoodu waxay kala yihiin:-
1.Axmed Cabdullaahi Max’med Faroole oo 47 sana jir ah isla markaana ay walaalo yihiin C/raxmaan Faroole, kaasi oo lagu eedeeyay inuu la shaqeynayay sirdoonka maamulka Puntland.
2. Maxamed Geelle Cabdulle oo 29 sano jir ah isla markaana lagu eedeeyay inuu hagayay howlgal ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka Dowladda Faransiiska, kaasi oo ka dhacay magaalada Buulo Mareer iyo duqeymo ka dhacay Degmada Jilib ee gobolka J/hoose.
3-Cabdi Raxmaan Cabdi Ladiif axmed ayaa isna lagu eedeeyay inuu ka tirsanaa Sirdoonka DF-ka, kaasi oo sida ay sheegtay Maxkamadda Al-Shabaab ku howlanaa dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah xarakada.
Saddexda nin ee Shabaabka uu ku toogtay Baraawe ayaa dhammaantood ka tirsanaa iyaga, waxayna sheegeen in saddexda nin midkood uu si dhow ula shaqeynayay nin uu qaaliga Maxkamadda ku sheegay in lagu magacaabo Adeer Cali.
Ma aha markii ugu horeysay oo Xarakada Al-Shabaab ay xukunada dilka ah ku fuliyaan horjoogayaal iyo maleeshiyaad iyaga ka tirsan, iyadoo horay dhowr goor ay toogasho ugu xukumeen rag iyo haween ay uga shakiyeen inay yihiin basaasiin u adeegeysa Dowladda Federaalka iyo hay’adaha sirdoonka wadamada shisheeye.
« Horta Dowladda Federaalka Soomaaliya sir ma leedahay?!! (Warbixin dhinacyo badan)
Guddoomiye Muungaab: “Ma aqbali doono in muwaadin Soomaliyeed dhulkiisa xoog lagu heysto” »